Umaki: ukudalulwa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 3, 2017 Douglas Karr
Njengoba kuchazwe yi-FTC, ukukhangisa komdabu kuyakhohlisa uma kunokumelela okungalungile noma noma ngabe kukhona ukushiywa kolwazi okungenzeka kudukise umthengi owenza ngokufanele ezimweni. Lesi isitatimende esizithobayo, futhi angiqiniseki ukuthi ngifuna ukuzivikela emandleni kahulumeni. Kuyini Ukukhangisa Kwabantu Bomdabu? IFederal Trade Commission ichaza ukukhangisa komdabu njenganoma yikuphi okuqukethwe okufana nezindaba,
Ummeli uDavid Castor, inkampani yabameli esebenza ngokukhethekile ngamabhizinisi okuqala namabhizinisi e-SaaS, ungithumelele i-imeyili ngempelasonto ngezindaba zokuthi i-FTC ixazulule isisulu sayo sokuqala semithetho emisha yokudalula. Njengengxenye yesivumelwano esihlongozwayo (i-PDF), inkampani ye-PR iReverb Communications nomnikazi wayo uTracie Snitker kumele basuse noma yikuphi ukubuyekezwa kwe-iTunes okwabhalwa ngabasebenzi bakwaReverb abazenza amakhasimende ejwayelekile futhi abahluleka ukudalula ubudlelwano phakathi kukaReverb nomdlalo wayo